Relationship Archives » Page 41 of 41 » Lifestyle Myanmar
ချစ်သူနဲ့ အမှတ်တရ ရှိစေမယ် နှစ်ပတ်လည် ဖြတ်သန်းနည်းအကြံဥာဏ်များ
by OMCTC January 4, 2016 April 5, 2017 018
အမြဲတမ်း သတိရနေစေမယ့် နှစ်ပါတ်လည်နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် သင်တို့ မလုပ်ဖူးသေတဲ့ အသစ်အဆန်းတစ်ခုခုကို နှစ်ယောက်တူတူ လုပ်လိုက်ပါ။ အတွေ့အကြုံသစ်တွေဟာ သင်တို့မှာ ရှိပြီးသား သံယောဇဉ်ကို ပိုခိုင်မာလာစေပြီး အမှတ်တရသစ်တွေ အများကြီး ဖြစ်လာစေပါတယ်။ သင်နဲ့ သင့်ရည်းစားနဲ့ရဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို ခုပြန်စဉ်းစားပြီး အမှတ်တရသစ်တွေလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါ။ သင် သင်တို့ နှစ်ပါတ်လည်ကို
by OMCTC January 3, 2016 April 5, 2017 015
ကိုယ်တွဲနေတဲ့ ချစ်သူနဲ့ ရေရှည်လက်တွဲသွားနိုင်မှာလား၊ မြဲမှာလားဆိုတာ သူနဲ့ကိုယ်ကြားမှာ ပြုမူနေတဲ့အရာတွေကို ကြည့်ပြီး သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ၁။တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက် ကျေးဇူးတင်စကားဆိုဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ဘေးမှာ အမြဲရှိပေးတဲ့အတွက်၊ ကိုယ့်ကိုနားလည်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သူ့ကိုပြောဖြစ်တယ်။ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကိုလည်း နေ့တိုင်း တစ်ခါနှစ်ခါမက ပြောဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဒီအတွဲဟာ မြဲဖို့သေချာပါပြီ။
by OMCTC January 2, 2016 April 5, 2017 020
ကိုယ့်ချစ်သူထံကို စာလေးတစ်စောင်လောက် ရေးပြီးပို့လိုက်ခြင်းဟာ ဘယ်လောက်ထိ ကဗျာဆန်သလဲဆိုတာ၊ သင်တို့ရဲ့ အချစ်ရေးကို ဘယ်လောက်ထိ လှုပ်ခတ်သွားစေနိုင်သလဲဆိုတာ သင်မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒီအရာဟာ သင့်ချစ်သူကောင်လေးကို သင်သူ့အပေါ် ဘယ်လောက်သံယောဇဉ် ကြီးကြောင်းသာမက သင်တို့နှစ်ဦးကို ပိုမိုရင်းနှီးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်များ အချစ်စာလေးတွေ ရေးပြီး ပို့သင့်တာလဲ ကြည့်ကြရအောင်။ စာလေးတွေရေးပြီး ကိုယ့်ချစ်သူဆီ ပို့ခြင်းဟာ
by OMCTC January 2, 2016 April 5, 2017 014
ကဲ ဒီဆောင်းပါးလေး မဖတ်ရသေးပဲ ချစ်သူအတွက် လက်ဆောင်ဝယ်ဖို့ မစဉ်းစားလိုက်ပါနဲ့ဦး။ နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်ဆိုတာ ကိုယ့်ချစ်သူမွေးနေ့မှာ လက်ဆောင်ပေးတာမျိုးနဲ့လည်း မတူဘူးလေ။ ဒီတော့ အဲ့ဒီလို နေ့မျိုးလေးတွေမှာ ပေးဖို့အကောင်းဆုံးနဲ့ လုံးဝမပေးသင့်တဲ့ လက်ဆောင်မျိုးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ သင့်ချစ်သူကို ပေးဖို့ အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်များ ၁။နှစ်ဦးသားစွန့်စားရမယ့် အတွေ့အကြုံတစ်ခုကို ဝေမျှတာမျိုး တကယ်တော့
ချစ်သူတွေဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ချစ်ကြတာပါပဲ။ လူမှုကွန်ယက်တွေပေါ်မှာလည်း ချစ်ကြောင်း ကြိုက်ကြောင်း ပို့စ်လုပ်နေကြတာပဲ။ ဒါပေမယ့် သင်တို့နှစ်ဦးဟာ တကယ်ကို စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ အားလုံးအားကျရတဲ့ စုံတွဲ၊ တစ်ဦးကို တစ်ဦး နားလည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ အမိုက်စား စုံတွဲ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ ဒီအချက်ကလေးတွေ ကြည့်ရုံနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့နှစ်ဦး တကယ်ကို ဒီအချက်တွေနဲ့
by OMCTC January 1, 2016 April 5, 2017 013
စွန့်လွှတ်ဖို့ သင်ယူရတာ လွယ်ကူတဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ သင် စိတ်ဝင်စားနေသူက သင့်ကို ပြန်စိတ်မဝင်စားရင် ဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်ရဲ့ စိတ်နှလုံးအတွက် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်နေရင်ဖြစ်ဖြစ် စွန့်လွှတ်ရမှာပါ။ အောက်ပါ ဖော်ပြပါ လက္ခဏာလေးတွေက သင့်ကို စွန့်လွှတ်ဖို့ အချိန် ရောက်တဲ့အကြောင်း ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ ၁.
နှစ်သစ်မှာ သင်အချစ်ရေး ပိုမိုလန်းဆန်းသစ်လွင်လာစေဖို့ လုပ်ဆောင်ကြည့်သင့်တဲ့ အချက်များ
by OMCTC January 1, 2016 April 5, 2017 044
သင်တို့နှစ်ဦးရဲ့ အချစ်ရေးဟာ တွဲတဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပျင်းရိစရာကောင်းလာတယ်လို့ မခံစားရလေအောင် နှစ်သစ်မှာ ဒီနည်းလေးတွေနဲ့ သင့်အချစ်ရေးကို ပိုမိုလန်းဆန်းအောင် လုပ်ဆောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ ၁။ သင်တို့နှစ်ဦးပထမဆုံး အတူချိန်းတွေ့ခဲ့တဲ့ နေရာလေးကို ပြန်သွားပြီး ဒိတ်လုပ်ပါ။ ၂။ နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ မွေးရပ်မြေကို တစ်လှည့်စီ သွားရောက် လည်ပတ်ပါ။ ၃။အသိမိတ်ဆွေတွေရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တွေကို အတူတူ
ထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ လက်တွဲဖော်ရှာဖွေနိုင်ဖို့ ခက်ခဲသည့်အချက်များ
by OMCTC January 1, 2016 April 5, 2017 016
(၁) သူတို့ဘာလိုချင်လဲသူတို့ကိုယ်တိုင်သိတယ် ————————————————— အမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ မိမိအတွက်အရေးပါမယ့်လူ၊ မိမိကိုလွှမ်းမိုးမယ့်လူ တစ်နည်းအားဖြင့် အားကိုးရမယ့်လူကို ရှာဖွေတတ်ကြတယ်။ ထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ မိမိကိုယ်ပိုင်တိကျတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေရှိတတ်ကြတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ဘာလိုချင်လဲသိကြသလို၊ သူတို့ဟာ သူတို့ဟာဘယ်လိုအကျင့်စရိုက်ရှိတဲ့အမျိုးသားနဲ့ကိုက်ညီတယ် မကိုက်ညီဘူးဆိုတာလည်း ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းရှိကြတယ်။ . (၂) သူတို့ဘ၀အဆင်ပြေဖို့ တခြားလူမလိုအပ်ခြင်း —————————————————— အရင်ခေတ်တုန်းကတော့ အမျိုးသမီးအများစုဟာ မိဘအိမ်မှာနေ၊